Njem nke Sanctuaries Odisha | Ebe obibi anụ ọhịa na Ogige ntụrụndụ mba
Ụlọ nsọ Odisha
Odisha nwere ọtụtụ oke ọhịa nke a na-ekwutọ n'oge na-adịbeghị anya. Ma ọbụna taa, otu n'ime ebe kachasị emetụ ya bụ ebe ọ na-ejupụta n'ahịhịa na-enweghị atụ, nke na-enye ebe obibi dị nchebe na nke anụ ahụ na anụ ọhịa dị egwu. E nwere ọtụtụ ebe obibi anụ ọhịa dị na Odisha dịka Park Park Park, Chilika Lake, ebe obibi dị ndụ nke anụ ọhịa Bhitarkanika, ebe Nandankanan Zoological Park, ebe obibi anyị dị na Mashakothi, ebe obibi Satkosia, ebe obibi anụ ọhịa Baisipalli, ebe nsọ Ambapani, ebe nsọ Khalasuni na ebe obibi Balukhand, wdg. ezighi ezi osisi na ugbo na ebe obibi odida Odisha
Gbasaa ebe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ kilomita 672 square, ọ dị n'okpuru mpaghara Kendrapara nke Odisha. Isi ugbo kachasị na Bhitarkanika bụ - agụ owuru, cat cat, hyena, cat cat ọhịa na ọtụtụ ndị ọzọ. Enwe njem nlegharị anya anụ ọhịa Odisha ụgbọ mmiri.
Mpaghara National Park Similipal:
E nwere ihe dị ka kilomita 320 si n'isi obodo Bhubaneswar dị n'ebe ugwu ọwụwa anyanwụ nke Odisha, Ogige Ntụrụndụ Simplipal dị na mpaghara Mayurbhanj, e kwuru na oke ọhịa a na-echekwa maka tigers n'afọ 1973.
Mmiri mmiri mmiri mmiri dị na Bay nke Bengal, nke dị n'ebe ndịda nke osimiri Osimiri Mahanadi, Chilika Lake bụ ọdọ mmiri n'ụsọ oké osimiri India.
Nandankanan Zoological Park, nke e guzobere na 1960 na ebe 14.16 square kilomita dị na district Khurda nke Odisha na mpụga obodo Bhubaneswar.
Ebe obibi Satkosia bụ ahịhịa nke ahịhịa ndụ na-adịghị mma nke na-agbapụta n'akụkụ mbara igwe nke 745.52 square kilomita na distrikti nke Angul, Nayagarh na Phulbani. Ebe nsọ ahụ malitere n'ime afọ 1976 ma bụrụ ihe ọkụkụ niile na-ahụ n'anya, ndị na-anụ anụ ọhịa na ndị njem freaks.
Ụlọ nsọ ndị ọzọ:
E nwere ọtụtụ ebe nsọ ndị dị na mpaghara dị iche iche nke Odisha dị ka ebe nsọ Gahirmatha, Chandaka-Dampara na ebe obibi anụ ọhịa, Balukhand-Konark Wildlife Sanctuary, Hadagarh Wildlife Sanctuary, Baisipalli Wildlife Sanctuary na ọtụtụ ndị ọzọ ......
Inyocha / Kpọtụrụ anyị